नेपालका ५९ जिल्लामा फैलियो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण खबरमञ्च
नेपालका ५९ जिल्लामा फैलियो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण
१९ जेठ, खबरमञ्च डेस्क, at 5:22 PM
By खबर मञ्च / June 1, 2020 / Comments Off on नेपालका ५९ जिल्लामा फैलियो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण
विर्तामोड । नेपालमा ५९ जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ। सोमबार अहिलेसम्मकै उच्च २२६ जना सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन्।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको कूल संख्या १ हजार ७ सय ९८ पुगेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार कञ्चनपुरमा ११ महिने बालिकासहित २ सय २६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। विराटनगरमा भएको परीक्षणमा झापा बाह्रदशी गाउँपालिकाका २ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।
पोखरामा भएको परीक्षणमा नवलपरासीका ३, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा ४३ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ। जसमा दैलेखका २४ र जुम्लाका १८ जना रहेका छन्। सुर्खेतमा भएको परीक्षणमा दैलेखका १७, सल्यानका १० र सुर्खेतका ५ गरी ३२ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ।
धुलिखेलमा परीक्षणमा कलिवस्तुका २, रौतहटका १८ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा ९२ जनाको पोजेटिभ देखिएको छ। धनुषाका ७, कपिलवस्तुका ३८, महोत्तरीका २, मकवानपुरका १, सर्लाहीका ३८, सिरहाका ५ र उदयपुरका १ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा १८ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ। कैलाली १४ तथा अछाम, बैतडी, डोटी र कञ्चनपपुरमा १-१ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाँकेका ७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा दाङका ९ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ।
अहिले प्रदेश नम्बर १ मा १ सय ३८, प्रदेश नम्बर २ मा ५ सय ८९, बागमती प्रदेशमा १५ र गण्डकी प्रदेशमा २३ जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ५ सय ७०, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ९७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ जना गरी १ हजार ५ सय ६९जना संक्रमित उपचाररत रहेको डा. देवकोटाले बताए।
देशभरीका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत २ सय २१ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।
अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट ७१ हजार ९ सय ३ र आरडिटी विधिबाट १ लाख १३ हजार ७ सय ५७ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट २ हजार ३ सय १० र आरडिटी २ हजार ६ सय ४८ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ।
देशभरी १ लाख ३३ हजार ९ सय ७५ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
Last Modified: June 1, 2020 @ 5:22 pm
झापा बाह्रदशीका सङ्क्रमित मुम्बईबाट आएका थिए, जिल्लामा सङ्क्रमितको संख्या ११३ पुग्यो
फेरि थपिए १३ सङ्क्रमित, कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको संख्या १८११ पुग्यो